မော်ရင်ဟိုရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားဖို့ ဆိုရင် သည်းခံမှုရှိမှရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ လုခ်ရှော | Football Myanmar
မော်ရင်ဟိုရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားဖို့ ဆိုရင် သည်းခံမှုရှိမှရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ လုခ်ရှော
November 27, 2018 Adam Willian	9 Comments
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား လေး ဖြစ်တဲ့ လုခ်ရှော ဟာ လွန် ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ် အတွင်း နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို လက်အောက် မှာ ပေါ်တူဂီ သား ရဲ့ ဝေဖန်မှု တွေ မကြာခန ဆိုသလို ရရှိ ထားခဲ့ ပေမဲ့ သူဟာ ဘယ်တုန်း ကမှ အငြိုး ထား တုန့်ပြန် ခြင်း မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
အခု တော့ လုခ်ရှော က နည်းပြ မော်ရင်ဟို လက်အောက် မှာ ကစား ဖို့ အတွက် ဆိုရင် အရည်ထူ ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း ၊ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ကလပ် အတွက် အကောင်းဆုံး တိုက်ပွဲ ဝင် ကစား ပေးဖို့ ယူနိုက်တက် အသင်း ဖော် တွေ ကို တိုက်တွန်း သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အကယ်လို့ ယူနိုက်တက် က ဟာ ဒီနေ့ ည ပွဲစဉ် မှာ ယန်းဘွိုင်း ကို အနိုင် ယူပြီး အုပ်စု ပြိုင်ဖက် ဗလန်စီယာ အသင်း ဟာ အီတလီ ထိပ်သီး ဂျူဗင်တပ် ကို ရှုံးနိမ့် သွား ခဲ့ရင် ယူနိုက်တက် တို့ နောက် တစ်ဆင့် ကို အခက် အခဲ မရှိ သေချာ ပေါက် တက်ရောက် သွားနိုင် မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
လုခ်ရှော ဟာ ယူနိုက်တက် မှာ မော်ရင်ဟို နဲ့ အတူ လက်တွဲ ပြီး ကစား ခဲ့တဲ့ ကာလ အတွင်း နည်းပြ ဖြစ်သူ ရဲ့ လူသိရှင်ကြား ဝေဖန် မှု တွေ ကို အကြိမ် များစွာ ခံ ခဲ့ရ ပေမဲ့ ဆောက်သမ်တန် ကစားသမား ဟောင်း ဟာ ဒီ ရာသီ အသင်း နဲ့ အတူ စာချုပ် သက်တမ်း ထပ်မံ တိုးမြှင့် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လုခ်ရှော ဟာ ဒီ ရာသီ ယူနိုက်တက် မှာ ခြေစွမ်း ကောင်း တွေ ပြန်လည် ပြသ နိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် အသင်း ဖက် က သူ့ကို စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့် ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အခု တော့ ယန်းဘွိုင်း အသင်း နဲ့ ကစား ရမဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ လုခ်ရှော က ပြတ်သား တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ အတွက် ခြေစွမ်း ကောင်း တွေ နဲ့ အတူ သက်သေ ပြ သွားဖို့ အသင်း ဖော် တွေကို တိုက်တွန်း သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဒီ မန်နေဂျာ နဲ့ ယူနိုက်တက် အတွက် ကစား ပေး ရမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျား ဟာ အရည်ထူ ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ဟာ မန်နေဂျာ ၊ ကလပ် နဲ့ ပရိသတ် တွေ အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင် ပေးဖို့ လိုအပ် နေ ပါပြီ ။ ကောင်းမွန် တဲ့ အရာ တွေ ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေ တယ်လို့ သိနေ ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် အသင်း နဲ့ အတူ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့် ခဲ့တာ ပါ ”
” ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးမား ဆုံး ကလပ် တစ်ခု ပါ ။ ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက် ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အနေ နဲ့ ကျရောက် လာတဲ့ ဝေဖန် မှု တွေကို ကျွန်တော် တို့ ခံယူ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် ကြိုးစား သွား ရမှာ ပါ ။ ကျွန်တော် တို့ ဟာ ကလပ် အတွက် ၊ ပရိသတ် တွေ အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်ဖို့ လိုအပ် နေ ပါပြီ ” လို့ လုခ်ရှော က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ စနေ နေ့ က ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ ရပြီး ဂိုး မရှိ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ထို့ အတူ ယူနိုက်တက် နဲ့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဟာ လည်း ကြီးမား တဲ့ ဖိအား တွေ အောက် ဆက်လက် ကျရောက် ခဲ့ ရပြီး ခက်ခဲ တဲ့ ရာသီ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
” ဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ အရာ တွေက တစ်ကယ့် ကို လက်ခံ ရ ခက်ခဲ လှ ပါတယ် ။ ဒါကို စောင့်ကြည့် ရတာ တစ်ကယ့် ကို စိတ်ပျက် ဖွယ် ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ အသင်း တစ်ခု အနေ နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဒီထက် အများကြီး ပိုကောင်း အောင် လုပ်ဆောင် ပြ နိုင်တယ် လို့ ယုံကြည် နေ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ ဒီ တစ်ပါတ် အတွင်း တစ်ကယ် ပဲ ကြိုးကြိုးစားစား လေ့ကျင့် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ တစ်ဦး အပေါ် တစ်ဦး တစ်ကယ် ပဲ ဖေးဖေးမမ အလုပ် လုပ်နေ ကြတာ ပါ ။ အချို့ ပွဲတွေ မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်ကယ် ပဲ ကောင်းကောင်း မကစား ပြနိုင် ခဲ့ ပါဘူး ”
” ကျွန်တော် တို့ ဒီကို လာပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ စကား တွေ ပြောတာ က တစ်ကယ် ပဲ လွယ်ကူ လှ ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ပြော ခဲ့တာ တွေကို ကွင်းထဲ မှာ သက်သေ ပြသွား နိုင်ဖို့ အမှန်တကယ် လိုအပ် ပါတယ် ”
” အသင်း ရဲ့ အဝတ်လဲ ခန်း ထဲမှာ ရှိနေ တဲ့ သူတိုင်း က ဖိုက်တာ တွေ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိ ပါတယ် ။ ဆု ဖလား တွေ ဆွတ်ခူး လို ကြတဲ့ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး တစ်ဦး အပေါ် တစ်ဦး ဖေးဖေးမမ အလုပ် လုပ်ရ ပါ့မယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ ဖိုက်တာ မဟုတ် ဘူး လို့ ခင်ဗျားလာ ပြောလို့ မရ နိုင် ပါဘူး ။ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး က ဒီ လိဂ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်း ဖြစ်ချင် နေကြ တဲ့ သူတွေ ချည်း ပါပဲ ” လို့ လုခ်ရှော က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
Previous Postယခုနှစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့တဲ့ #ဒရော့ဘာNext Postအဲဗာတန် အသင်း နဲ့ အပြောင်းအရွေ့ အပေါ် ဘယ်လို တုန့်ပြန် ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ လီဗာပူးစတား ရှကီရီ
9 thoughts on “မော်ရင်ဟိုရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားဖို့ ဆိုရင် သည်းခံမှုရှိမှရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ လုခ်ရှော”
cach chon mua quan ao hang thung says:
edwardhpnk.x.fc2.com May 14, in China, from traditional matchmaking to the rise of online dating sites, Jiayuan (Beautiful Destiny), China’s largest online dating service.
Statistics show thatacompatible relationship that you meet online always lasts for long, compare withaFrench date you meet at the bars or nightclubs. When your ex is courting another person, it may be an extremely demanding time. This is how you actually start learning things about her pornstars escort